Hisongona An’i Etazonia i Shina Amin’ny 2049? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Janoary 2013 12:36 GMT
Tsy hoe mifaninana fotsiny amin'i Etazonia i Shina, fa koa nanao fikarohana momba ny fotoana takiana hihoarana azy ireo. Araka ny nambaran'ny masoivohom-baovao Shinoa Xinhua, ny tatitra iray navoakan'ny Akademia Shinoa Momba ny Siansa tamin'ny 8 Janoary 2013 dia miteny fa tahaka ny hisongona an'i Etazonia amin'ny sehatra rehetra i Shina amin'ny 2049, ary ho avy ny fiverenan'ny firenena Shinoa amin'ny fahatanorany. Tonga miaraka aminà fandaharam-potoanan'ny dingana mavesa-danja mandeha amin'ny antsipirihany ilay fikarohana.
Raha mbola velona i Mao, mety ho nihevitra tanteraka izy fa hoe ela loatra ilay dingana. Tahaka izay nomarihany tamin'ny 1957, efa naminavina izy fa ho 15 taona no ilaina hanenjehana sy hihoarana an'i Angletera.
Nanazava [zh] ilay fanambaràna i Yang Duogyui, lehiben'ilay vondrona mpikaroka :
Rehefa miteny isika hoe “fiverenan'ny firenena Shinoa ho amin'ny fahatanorany”, izaho manokana dia mihevitra hoe “fiverenana amin'ny fahatanorana” dia midika tsy amim-pisalasalàna ny maha-laharana 1 eto amin'izao tontolo izao. Ary raha ny amin'ny hahatanteraka an'izany na tsia, betsaka ny singa tsy azo antoka amin'ny hoavy. Ny tatitray dia mifototra amin'ny zava-misy amin'izao fotoana amin'ny resaka “fahasalamana eto amin'ny firenena”, izay trangan-kevitra iray vaovao; voajanahary ho an'ny olona ny hanam-pisalasalàna mikasika azy ity.
Sarin'ny fàfana avy amin'ilay tatitra “Hihoatr an'i Etazonia i Shina amin'ny 2049″ avy amin'i Youku
Nampiany fa hanohy ny hikaroka hatrany ilay vondrona. Na teo aza ny fanazavàny, niteraka eso mahatsikaiky tao amin'ny Sina Weibo ilay fanambaràna, nahitàna ireo mpisera ety anaty aterineto nikiaka ny hiatrehana ny tena olana ao Shina. Na ny Masoivohom-Baovao Xinhua aza dia nanoratra tao amin'ny Weibo [zh] hoe :
Manery ny olona hibanjina ny tena zava-misy iainana [ilay tatitra] … Vahao aloha ny olana ara-tsosialy alohan'ny hiresahana mikasika ny “fisongonana” sy ny “fiverenana indray ho tanora”.
Huang Yigang, mpanao gazety zokiolona, nanely ny hoe [zh]:
Nitondra loza maro hoan'ny vahaka Shinoa ny nofinofin'i Shina “hisongona an'i Angletera sy Etazonia”; ankehitriny, mbola misy ihany ny olona sasany miroso mampiasa ity fialàna bàla ity handemena saim-bahaka. Ny tanjona dia ny hnafenana ny olana ara-tsosialy sy ny tsy fahombiazana ara-politka.
Niteny koa i [zh] Yue, mpianatra iray:
Ity no fikarohana faran'izay tsy misy dikany indrindra vitan'ny Akademia Shinoa Momba ny Siansa. Na ilay hoe hisongona an'i Etazonia fotsiny aza dia efa tsy misy dikany. Dia sahin-dry zareo ve ny hamoaka fikarohana hampitahàna ny vidin-trano, ny vidin-tsakafo, ny tontolo iainana, ny fiahana ara-pahasalamana ary ny fihenjanana eo amin'i Shina sy Etazonia?! Ny famahàna ireny olana ireny no tanjona farany ho an'ny fandrosoan'i Shina.
Fen, mpandalim-baovao, dia nanoratra hoe [zh]:
Dimampolo taona lasa izay, nambarantsika fa ho afa-hisongona an'i Angletera sy Etazonia isika ao anatin'ny 15 taona, ankehitriny indray isika milaza fa hisongona an'i Etazonia afaka 30 taona. Nandeha ny fotana, saingy mbola mitoetra foana ho ny teo ihany ny toe-tsaina mirefarefan'ny firenena.
Nanorara [zh] i Qishi Songzang, mpikatroka mafana fo ety anaty aterineto, hoe :
Raha tsy misy demaokrasia sy fahalalahana, tsy misy ilàna izay firnena matanjaka any, ankoso-bolamena fotsiny hany izany. Tianay raha mitohy miaina tahaka ny tany alohan'ny 1911 izahay.
schumanzou, mpisera ety anaty aterineto, naneho hevitra [zh] tamim-panesoana hoe :
Ny harena ara-tsosialin'ireo manampahefana sy ny fiharatsian'ny tontolo iainana dia nahasongona an'i Etazonia, inona hafa koa no mbola tianareo hihoarana?
Zhou Yantao, mpisera iray hafa ety anaty aterineto, no naneho [zh] ahiahy momba ny hoavin'i Shina :
Inona sisa no mba tavela ho an'i Shina afaka 20 taona? 5% amin'ny Shinoa no mifehy ny 95% amin'ny harena ao Shina, ary 5% nifindra monina na eo an-dalam-pifindrana monina, midika izany fa 20 taona aorian'izao dia 95%amin'ny harena ao Shina no tsy ho an'ny Shinoa intsony? Inona sisa no ho tavela? Olona antitra an-tapitrisa, tendrombohitra sy renirano voaloto, ary tany iray tsy misy harena ankibon'ny tany intsony. Ny sarambabem-bahoaka no mahalala misimisy kokoa!
Zhan Hao, mpanoratra iray malaza, manana mpanjohy maherin'ny 200.000 ao amin'ny Weibo, nandalina hoe [zh]:
Aorian'ny famakiana ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitra mikasika ilay vaovao, ho hitanao hatraiza ny fahatsapan'ny vahoaka Shinoa ny fahambaniany, ary rehefa lasa matanjaka ara-bakiteny tokoa i Shina, hivadika ho fieboeboana io fahatsapàna fahambaniana io, izay angovo ratsy mandrakariva.
i Georgi McCarthy no nanatanteraka ny vakiteny fanamarinana ny teny Anglisy tamin'ity lahatsoratra ity.